Ikhiphedi ekhanyisiwe yensimbi efakwe kumshini wokukhipha imaski-Izindaba-Yuyao Xianglong Communication Industrial Co, Ltd.
Ikhiphedi ekhanyisiwe yensimbi efakwe kumshini wokuthengisa imaski
Isikhathi: 2020-05-19 Hits: 36
Umenzi wezinto zokugembula uRazer uhlose ukukhipha izigidi zamaski obuso bamahhala eSingapore njengoba izwe libhekana nokwanda kwamuva kwamacala e-coronavirus.
Imishini yokuthengisa imaski yobuso isiqala ukuvela ezungeze i-Asia njengoba abahlinzeki befuna izindlela ezilula zokufinyelela ngqo emphakathini. Ngenyanga edlule, umqoqi wezobuciko ovelele eHong Kong naye wathi uzosabalalisa izifihla-buso zamahhala kubantu abasedolobheni esebenzisa izitolo zemishini yokuthengisa.
Umkhakha Wezokuxhumana weXiangLong unikeza izinhlobo eziningi zekhwalithi ephezulu, engangeneki kwamanzi, evimbela ukungonakaliswa ikhiphedi yomshini wokuthengisas. Zonke izinkinobho zenziwe ngokuqina insimbi engagqwali or i-zinc alloy. Ubuso benkinobho, ukwakheka nephethini kungenziwa ngezifiso ngokuya ngezidingo zamakhasimende.
Okwedlule: 4x4 stainless steel metal keypad installed in Uniqlo's vending machines
Okulandelayo: Liyini ikusasa lomkhakha we-ATM?